तपाईलाई कमजोरी महसुस हुन्छ ? यी हुन् कमजोरीपन बाट बच्ने उपाए
हामीले दैनिक विभिन खालका कामहरु गर्नुपर्छ । यसका लागि हामी स्वास्थ्य हुनु जुरुरी हुन्छ । कहिले काँही हामी काम गर्ने क्रममा आफु कम्जोर बहेको महसुस गर्ने गर्छौं । कमजोरीले गर्दा हामीलाई खान पनि मन...
सिरानी मुनि लसुन राखेर सुत्नुस, हुन्छन् यस्ता अचम्मका फाइदा !
साधारणतया हामिले लसुन दिनहुंजसो खाईरहेका हुन्छौं । खानाको स्वाद बढाउनका लागि लसुनलाई प्रयोग गरिन्छ । तर यसलाई यदि राती सुत्नेबेलामा सिरानी मुनी राख्दा अपत्यारिला फाइदा हुन्छन् । यसमा पाइने वोलेटाइल ओयलको गन्ध नाकको बाटो...
धादिङको गजुरी र बेनिघाटमा निशुल्क प्राथमिक उपचार तालीम हुदै
धादिङ । डिस्कभरी रोयल स्पोर्ट्स एल.एल सी को आयोजना र गैरआवासीय नेपाली संघ रास्ट्रिय समन्वय परिषद युएईको पहलमा पहिलो चरण अन्तर्गत नेपालका ७ जिल्ला मध्य धादिङको बेनिघाट र गजुरी गाउँपालिकामा आउदो चैत २ गते...
गुप्ताङ्गको रौं काट्नेहरुलाई यस्ता रोग लाग्ने खतरा बढी
एजेन्सी । धेरैले आफ्नो गुप्ताङ्गका रौं काट्ने गर्दछन् । तर, जसले यसरी आफ्नो गुप्ताङ्ग वरपरको रौं शेभ वा भैक्स वा काट्छन् पनि उनीहरुलाई यौन रोग लाग्ने खतरा अन्यको तुलनामा बढी हुन्छ । यसबारेमा गरिएको...
महिलाहरुले पुरुषका कस्ता गुणलाई मन पराउँछन् भन्ने विषयमा धेरैजसो पुरुषहरुले ध्यान दिने गरेका हुन्छन् । महिलाको नजरमा पर्न र मन जित्नका लागि हरेक खालका प्रयास गरिरहेका हुन्छन् पुरुषहरु । यही विषयलाई ध्यान दिएर वैज्ञानिकको...
संसारभरी नै एउटा मान्यता छ महिलालाई बुझ्न कठिन हुन्छ । केटीहरु कम बोलेर धेरै कुरा भन्छन् । पुरुषले महिलाका कुरा केवल बोलीबाट मात्र बुझ्न सक्दैनन् । उनीहरुको ब्यवहार पनि बुझ्नु महत्वपूर्ण हुन्छन् । महिलाले...
यौन उत्तेजनामा आउने र विभिन्न चरणमा अघि बढ्दै जाने कुरा कतिपय बाह्य तथा आन्तरिक कुराहरूमा भर पर्छ । किन्सेले गरेको अध्ययनमा योनिमा लिङ्ग प्रवेश गराएको दुई मिनेटभित्रै ७५ प्रतिशत पुरुषले चरमसुख पाएको देखिएको थियो...
समलैंगिक यौनसम्बन्ध भन्नाले उस्तै लिंगका दुई व्यक्तिबीच स्थापित यौनसम्बन्ध हो । यो कुनै रोग होइन । यसलाई सन् १९७५ मै विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वीकार गरेर घोषणा गरिसकेको छ । समलिंगी यौनसम्बन्ध एउटा प्रवृत्ति हो,...